Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » आधारातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कसले गरायो हेलिकोप्टर अवतरण ?
काठमाडौं, फागुन १२ । आकाशको उडान हो, मौसम, इन्धन र समयको सवाल मुख्य हुन्छ । तर, यी तीनै चिजको पर्वाह नगरी प्रधानमन्त्री रातारात उडिरहनुभएको छ ।
आखिर किन ? अस्ति अबेर राति बालुवाटारमा सैनिक हेलिकोप्टर अवतरणको चर्को आवाजले छरछिमेकमा तरङ्ग फैलियो । ०६२÷६३ को आन्दोलनलगत्तै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कास्कीको सिक्लेसबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई ल्याएकै शैलीमा विप्लवलाई पो वार्ताको निम्ति लिएर आए कि भन्ने पनि भयो ।
हिजो प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेता विप्लवको जन्मदिन थियो । त्यही दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक । अनि, मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बोलाइएको । आइतबार उनी महेन्द्रनगर पुगेका । किनभने, कञ्चनपुरमा निर्माण हुन लागेको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनेको थियो । उनी आजकल उद्घाटन र शिलान्यासका निम्ति एकदमै हतारोमा छन्, गरिहाल्ने मनस्थितिमा छन् ।
त्यहाँ गएर मात्र भएन, सभालाई पनि संबोधन गर्नुपर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कथा राख्नुपर्यो । त्यसो गर्दागर्दै साँझ पर्यो । र, त्यही हतारोले हो, उनलाई भोलिपल्टका सबै कुरा भ्याउन रातारात उड्नुपर्ने बनाएको । त्यसो त अहिले राष्ट्रपति कतै जानु परे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नगई शीतल निवास र प्रधानमन्त्री बालुवाटारकै हेलिप्याडबाट उड्न थालेका छन् । सेनापतिको हकमा पनि १० बाहिनी (भैरवनाथ गण) बाट उड्ने व्यवस्था छ ।
लामो दूरीको यात्रा गर्न हेलिकोप्टरको क्षमताजत्तिकै इन्धन भर्नुपर्छ । अत्याधिक इन्धन भएको अवस्थामा हेलिकोप्टर टेकअफ गर्न चुनौति र खतरा बढी हुन्छन् । फर्किंदा महेन्द्रनगरमै साँझ परिसकेको थियो । फेरि काठमाडुसम्म आइपुग्ने इन्धन पनि थिएन ।
त्यसैले धनगढीमा उत्रिएर इन्धन भरियो । र, काठमाण्डुको उडान भयो । अवतरणचाहिँ टोलछिमेक थर्काउँदै सीधै बालुवाटारमा गरिएको हो । जनआस्था साप्ताहिकबाट